Alshabaab oo calankooda ka taagay tuulooyin hoos yimaadda Gaarisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo calankooda ka taagay tuulooyin hoos yimaadda Gaarisa
22nd May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gobolka Woqooyi Bari Kenya, Alshabaab ayaa markii labaad gudaha u galay tuulooyin ka tirsan gobolkaas muddo 3 maalmood gudahood ah.
Dabley hubeysan oo ka tirsan Alshabaab ayaa weeraray 3 tuulo oo gobolka Woqooyi Bari Kenya. Tuulooyinka Alshabaab galeen ayaa kala ah: Yumbis iyo Haluqo ee ka tirsan deegaanka Gaarisa iyo degmada Ramu ee hoos timaada deegaanka Mandera.
Al-Shabaab ayaa deegaanadaasi waxa ay ka taageen calanka madow ee astaanta u ah, ka hor saacado inta aanay halkaasi gaarin ciidammada ammaanka ee Kenya.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya, ayaa sheegay in ciidammada ammaanka ee Kenya ay dagaal kala hortageen Alshabaab, kana saareen tuulada Yumbis ee dhacda waqooyi bari magaalada Gaarisa.
Hasayeeshee dadka deegaanka oo ay warbaahinta u sheegay in deegaanka ay weli ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ka tirsan ee calankooda taagtay.
Mahad Cismaan Beereed, oo laga soo doorto deegaanka Jeeraa Jilaaa ee Faafi ee Gaarisa, ayaa sheegay in ay layaab tahay in Kenya oo dowlad aheyd muddo dheer ay maanta deegaano ka tirsan iska maamulanayaan maleeshiyaad Alshabaab ka tirsan.
Waxa uu ku dhaliilay dowladda Kenya in aanay wax ka qaban ammaanka deegaankaasi, isagoo sheegay in muddo 3 sano ah aanu deegaankaasi lahayn wax ciidan amaan ah.
Sida uu qoray wargeyska The Standard ee kasoo baxa dalka Kenya, salaasadii lasoo dhaafay rag aad u hubeysan oo ka tirsan Alshabaab ayaa xilli maqrib ah galay labo masjid oo ku yaalla tuulooyinka Tumtish iyo Kabasalo oo ka tirsan degmada Ijaara, ee deegaanka Gaarisa.
Sida wargeysku xusay, ragga Alshabaab-ka ah ayaa muddo 2 sacadood ah jeedinayey muxaadaro iyo khudbado ka dhan ah dowladda Kenya, waxeyna markii dambe galeen keymo ku dhow magaaladaas.
Bishii la soo dhaafay Al-Shabaab ayaa weerar ay ku qaaday Jaamacadda Gaarisa waxa ay ku dishay ku dhawaad 150 qof.
Sacuudiga: Masjid Shiico oo naftiis hure isku qarxiyey
Baarlamanka Federaalka oo cod u qaadaya baarlamanka Juba